“Waxaan diiday inaan u dhaqaaqo kooxaha Manchester City iyo Paris Saint-Germain” – De Jong – Gool FM
(Barcelona) 26 Sebt 2019. Xiddiga Khadka dhexe reer Holland iyo kooxda Barcelona ee Frenkie de Jong ayaa shaaca ka qaaday inuu helay dalabyo uu ugu biiri karay kooxaha Paris St Germain ama Manchester City suuqii dhawaa ee xagaaga, laakiin ugu dambeyntii wuxuu go’aansaday inuu heshiis cuub u saxiixo Barcelona.
Frenkie de Jong ayaa ku soo caga dhigtay garoonka Camp Nou suuqii xagaaga ee la soo dhaafay qiimo dhan 75 milyan oo euro, isagoo boos joogta ah ka helay shaxda tababare Ernesto Valverde.
De Jong ayaa wareyi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Haddii aan ku biiri laheyn Barcelona, inkastoo ay adag tahay in xilligan la sheego balse laga yaabaa inaan u dhaqaaqi lahaa kooxaha Paris St Germain ama Manchester City”.
Intaas kaddib Xiddiga Khadka dhexe reer Holland ee Frenkie de Jong ayaa ka hadlay sida ay u socdeen wada hadalada u dhexeeyay isaga iyo Barcelona kahor inta uusan imaanin wuxuuna yiri:
“Markii ugu horreysay ee aan maqlay xiisaha Barcelona waxa ay aheyd 2018-kii, wakiilkeyga ayaa i soo wacay wuxuuna ii sheegay in Barça ay i xiiseyneyso”.
“Wuxuu iga codsaday inaan la hadalno iyaga, markii aan maqlay arritaas aad ayaan ugu farxay”.
Yeeelkadeeda, Barcelona ayaa u safreysa sabtida soo aadan kooxda Getafe, si ay u wada ciyaaraan kulan ka tiran horyaalka La Liga ee dalka Spain, isla markaana ay soo afjaraan natiijo xumida ka heysata kulamada ay ku ciyaarayaan meelaha ka baxsan garoonkooda Camp Nou.